गुल्मीमा तीजको दिन कहाँ कहाँ कस्तो कार्यक्रम भयो ? हेरौँ फोटोहरु – Gulmiews
गुल्मीमा तीजको दिन कहाँ कहाँ कस्तो कार्यक्रम भयो ? हेरौँ फोटोहरु
No comments	महिलाहरुको महान चाड बुधवार देसभर धुमधामका साथ मनाईएको छ । आजै गुल्मीका पनि बिभिन्न स्थानहरुमा बिबिध कार्यक्रमहरु गरी तीज मनाईएको छ । आज तपाईंहरुको गाउँ ठाउँमा कहाँ कहाँ कस्तो कार्यक्रम भयो? फोटो हामीलाई info@gulminews.com मा पठाउन वा सामाजिक सन्जालहरुमा #gulminews ट्याग गर्न सक्नुहुनेछ ।
यस सांस्कृतिक पर्वमा पानीसमेत नखाई विवाहित महिलाहरु शिवको पूजा-आराधना गर्दै आफ्ना पतिको दिर्घायु, सुस्वास्थ्यको कामना गरी ब्रत बस्दछन् भने अविवाहित महिलाहरु सुयोग्य तथा आदर्श पति प्राप्त गर्ने कामनाका साथ ब्रत बस्ने गर्दछन । आजको दिन जलसमेत नखाई ब्रत बस्नुपर्ने हुनाले अघिल्लो दिन बेलुकी नै विभिन्न परिकार तथा मिष्ठान्न तयार गरी व्रतालुहरुले दर खाने प्रचलन छ । तीजको अवसरमा आज महिलाहरु विहानै विभिन्न मुलुकभरका विभिन्न तिर्थस्थल मन्दिर तथा देवालयमा गई शिव पार्वतीको पूजा र उपासनामा व्यस्त हुनेँछन् ।
महिलाहरु आज तिज सम्बन्धी गीत, भजन र चुट्का गाएर आफ्नो मनभित्रको बह पोख्ने गर्दछन् । आज बिहानैदेखी महिलाहरु सौभाग्य सुचक धागोपोते, टीका-गरगहना, रङ्गीचङ्गी कपडा, पहिरेर आराध्यदेव पशुपतिनाथ लगायत अधिराज्यका विभिन्न शिवमन्दिरहरुमा जम्मा भैरहेका छन् ।
गुल्मीमा कहाँ कहाँ कस्तो कार्यक्रम भयो ? हेरौँ फोटोहरु:
गौँडाकोट स्थित राजाको तीज कार्यक्रम । फोटो: पदम बहादुर छेत्री
ईश्मा मैदानमा तीज कार्यक्रममा नाच्दै । फोटो: टोपलाल अर्याल
तम्घास स्थित महेन्द्र उच्च माबीमा आज आयोजित तीज कार्यक्रममा नाच्दै, रमाईलो गर्दै । फोटो: तारा भुषाल
मुसिकोट देउरालीमा आयोजित कार्यक्रमको एक झलक । फोटो: महेन्द्र घिमिरे
तम्घास चिदिचौरमा आयोजित तीज कार्यक्रका सहभागीहरु । फोटो: हरी कुमार श्रेष्ठ
रुपाकोटको कार्यक्रमको नाचगान । फोटो: कृष्ण थापा
चारपाला फ्रेण्ड्स क्लबले दरबार देबिस्थानमा आयोजना गरेको तीज कार्यक्रममा राष्ट्रिय कलाकारहरु । फोटो: रामकृष्ण कंडेल
भुचाचिदीमा आज दिउँसो देखिएको तीजको रौनक । फोटो: ज्ञानु सापकोटा
वामी ३ परुवामा परमेश्वर शिव मन्दिर परिसरमा हरितालिका तिजको अवसरमा भक्तालु महिलाहरु नाचगान गर्दै । फोटो: गजाधर सापकोटा